Banyere Anyị - Wuxi Tricera Trading Co., Ltd.
Wuxi Tricera Trading Co., Ltd. ("Trimill" bụ aha akara anyị) bụ ụlọ ọrụ agbakwunyere
na azụmaahịa azụmaahịa nwere afọ 20 nke ahụmịhe ọkachamara n'ịrụpụta ihe igwe ihe na igwe ihe.
Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ R&D
Ịre ahịa kwa afọ
Wuxi Tricera Trading Co. Ltd. ("Trimill" bụ aha akara anyị) bụ ụlọ ọrụ agbakwunyere na ụlọ ọrụ azụmaahịa nwere afọ 20 nke ahụmịhe ọkachamara na ngwa nrụpụta ihe na ngwa ihe igwe nri. Dabere na ike siri ike nke ụlọ ọrụ anyị-Wuxi Dahua Fine Ceramic Co., Ltd. ewepụtara ụlọ ọrụ mmepụta ihe na 2001, ọ dị na Wuxi, n'akụkụ akụ nke Ọdọ Taihu mara mma, naanị kilomita 100 site na Shanghai. Mpaghara ụlọ ọrụ na -emepụta ihe karịrị mita 6000, mpaghara ụlọ ọrụ dị ihe dị ka square mita 1800. The ụlọ ọrụ nwere ihe magburu onwe otu nke fọrọ nke nta ka otu narị mmadụ, gụnyere ihe karịrị 10 ihe onwunwe ọkachamara oru, 3 n'etiti na agadi quality injinia na anyị management team.Our ụlọ ọrụ pụrụ iche na mmepụta nke seramiiki grinder na ndị ọzọ yiri ngwaahịa, kwa afọ mmepụta ọkọkpọhi 5 millsion setịpụrụ ma nwee ahịrị mmepụta zuru oke na akụrụngwa nnwale dị elu.
Ọrụ Ndị Ọkachamara Ọkachamara
Nnukwu ahụmịhe nke DAHUA gụnyere mmepe, imepụta na ntinye nke seramiiki ụlọ ọrụ. Maka gị nke a pụtara nchekwa, ntụkwasị obi yana ọrụ ndụmọdụ zuru oke.
DAHUA nwere saịtị mmepụta nke otu nwere ya mere ọ nwere ezigbo mmetụta na usoro mmepụta. Nke a pụtara nnukwu mgbanwe na nkwa ọkọnọ nye gị.
Ọrụ lọjistikị anyị dị iche iche nwere ike ịnye nnyefe ngwa agha kachasị ọsọ na kacha mma maka ndị ahịa ụwa. Izute ihe ndị ahịa chọrọ maka ịrụ ọrụ nke ọma, adaba na nchekwa yana nhazi nhazi. N'agbanyeghị ebe ndị ahịa gị nọ, a ga -egbo mkpa gị ọ bụla site na netwọrụ ọrụ lọjistik anyị siri ike.
Ogo a pụrụ ịdabere na ya
Dahua na-enye asambodo sistemụ sistemụ ISO9001 kachasị ọhụrụ yana nyocha nyocha kwa afọ. Ụlọ ọrụ na -achịkwa gburugburu ebe obibi, akụrụngwa na ngwaahịa dabere na asambodo chọrọ. Nnyocha niile dị mma na njikwa akụrụngwa nke ụlọ ọrụ ahụ na -emezu ihe mba ụwa chọrọ.
Companylọ ọrụ anyị enwetala asambodo sistemụ ịdị mma ISO 9 0 0 1: 2 0 1 5, ngwaahịa ndị a agafela nnwale nke kọntaktị kọntaktị nri site n'aka ụlọ ọrụ nnwale TUV SGS. Ngwaahịa ahụ na -emezu ihe achọrọ nke ROHS, FDA, EU LFGB na ọtụtụ mba ndị ọzọ. A na -ebupụ ngwaahịa anyị ozugbo na USA, Japan, South Korea, Germany, Austria, Singapore na obodo ndị ọzọ. Ihe ọhụrụ na -aga n'ihu bụ ebumnuche ebighi ebi anyị. Anyị nwere ikike imepụta ngwaahịa siri ike wee nweta ọtụtụ patent na nhazi ngwaahịa na echiche. N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ụlọ ọrụ anyị arụpụtala ọtụtụ ngwaahịa ọhụrụ, gụnyere nnu eletriki na ose grinder, nnu ntu na ose grinder, igwe kọfị eletriki, kọfị kọfị akwụkwọ ntuziaka, akụkụ seramiiki wdg. ruru, anyị na -atụ anya ka gị na gị rụkọọ ọrụ!
Anyị nwere saịtị mmepụta nke otu, yabụ na-enwe mmetụta dị mma na usoro mmepụta. Nke a pụtara nnukwu mgbanwe na nkwa ọkọnọ nye gị.
Ụfọdụ ndị ahịa anyị
Ndị ahịa anyị ama ama bụ: Japan KYOCERA, Japan HAIRO, England DYSON, China JOYOUNG, wdg.
Kedu ndị ahịa na -ekwu?
Ngwaahịa dị mma, na -atụ anya ịgbaso nnukwu imekọ ihe ọnụ!
Ngwaahịa dị ka akọwara, ịdị mma dị ka atụ anya.
Onye mmekọ ogologo oge na china, ọkachamara na ọmarịcha! Afọ ojuju!